Maungtintyin: February 2011
ဤကမ္ဘာလောကဓာတ်မှာ ဖွင့်ဆိုရှင်းမပြနိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလျင် အဲဒါကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပုံဖော်နိုင် သရုပ်ဖော်နိုင်တယ်ဆိုလျင် ဒီနောက် ဒါဟာ အမှန်တရားမှ အလွန်ဝေးကွာလွန်းလှပါတယ်။ သင်ဟာ ပန်းများကို ပေးပါတယ်။ သင်ဟာ ပွေ့ ဖက်ပါတယ်။ သင်ဟာ ၀ပ်စင်းပါတယ်။ သင်ဟာ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချုိ့အရာများကိုတော့ သိမြင်ခွင့်မပေးဘဲ ဆက်လက်ချန်ရစ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက “အသင် အကျွန်ုပ်ကို ဘယ်လောက်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ အကျွန်ုပ်ကို ပြောပြပါ” လို့ Rama က Hanuman ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ Hanuman က “My Lord! အကျွန်ုပ်ဟာ သင့်အတွက် အကျွန်ုပ်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြဖို့ မစွမ်းနိုင်ပါ။ သင် တွေ့မြင်ချင်ပါသလား? အကျွန်ုပ်ဟာ အကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားကို ဆုတ်ဖြဲဖွင့်ဟပြီး သင့်ကို ပြပါ့မယ်”။
သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်လျောက်လုံးအတွက် သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘယ်လောက်လောက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိတယ် ဆိုတာ ဖော်ပြဖို့ သင်ကြိုးစားလျင်တောင် သင်ဟာ အဲဒါကို အပြည့်အ၀ ဖော်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ သင်ဟာ စိုးစဉ်း အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသာ တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ရိပ်ခနဲမြင်ခြင်း, ဖျက်ခနဲ ကြည့်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Satvik, Rajsik, Tamsik တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Satvikဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အပြန်အားဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုကို လိုလားမျော်လင့်မထားတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Rajsikဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ စိတ်ဂနာမငြိမ်ရောဂါထခြင်းနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြန်လည်ရရှိဖို့ တွဲထား ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။
Tamsikဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖျက်ဆီးယုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအရာဝတ္ထုသုံးမျိုးမှ လွတ်ကင်းရှင်းလင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတစ်စင်းလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်လယ်တစ်စင်းမှာတောင် အောက်ဆုံးကြမ်းပြင်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ အကန့်အသတ်ကင်းတဲ့- အဆုံးမရှိအနန္တဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်လို ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်ခြေကြမ်းပြင်မှ ဧရာမကျယ်ပြော လှတဲ့ကောင်းကင်တိုင်အောင် ၀ဲပျံမြင့်တက်ပါတယ်။ သင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်တဲ့အခါ သူတို့မှာ သင် ဘာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ သက်ဝင်တာပါလဲ? သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုလား ? ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းကိုလား? ဒါမှမဟုတ် လူသားအဖြစ်ကိုလား?
မကြာခဏဆိုသလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လျော့လာနည်းလာတတ်ပါတယ်။ အရေးမကြီးဟု ထင်မြင်လာပါတယ်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့မိခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကလေးငယ်ဟာ အရွယ်ရောက်လာတာနှင့်အမျှ ဆုံချက်အဖြစ် ယခု သူဟာ သူငယ်ချင်းများ- ဇနီး ဒါမှမဟုတ် ခင်ပွန်း- သားသမီး ကလေးများ အပေါ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ့မိခင်အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လျော့နည်းမှေးမှိန်အားပျော့လာပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်တို့နှင့် ဆိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ အခိုက်အတံ့တိုင်းမှာ တိုးတက်ကြီးထွားနေပါတယ်။
ပညာရှိတစ်ယောက်, သူတော်စင်တစ်ဦးနှင့်အတူတကွ တည်ရှိနေခြင်းက သင့်ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ကုန်စရာ အခြေအနေ ဖြစ်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ သင် အချိန်ကို အသုံးပြုတဲ့နေ့တိုင်း နက်ရှိုင်းမှုဟာ ပိုလို့ အတွဲညီ လိုက်ဖက်လာတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ သူတော်စဉ်တစ်ဦးနှင့်အတူတကွ သင်အချိန်ကို အသုံးပြုတဲ့ အခိုက်အတံ့တိုင်း သွေးသား ဆက်စပ်မှုက ပိုလို့ပိုလို့ နက်နဲနက်နဲလာတယ်လို့ သင်ထင်ရပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ဒီအမျိုးအစားမှာတော့ ဘယ်တော့မှ ကျိုးပျက်ကွဲပေါက်သွားခြင်း မရှိပါ။ အဲဒါက ဘယ်တော့မှ သေးသိမ်အောင် ဆုတ်ယုတ်လျော့နည်းလာအောင် မလုပ်ပါ။ ဘုရားသခင်တို့နှင့်ဆိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အလွန်သန့်စင်ပါတယ်။ အလွန်နုးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖော်ပြဖို့ရာ မစွမ်းနိုင်ပါ။ အဲဒါကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညဏ်မမီတဲ့အရာကို နားမလည်နိုင်ပါ။ အဲဒါတွေကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြဖို့ မစွမ်းနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ “Sukshmataram Anubhavarupam”, ဒါဟာ ထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အဲဒါနှင့် နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အဲဒါကို ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းမျက်ရည်ဖြင့် ယိုစီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အဲဒါကို ဖော်ပြသိမြင်စေဖို့ မစွမ်းနိုင်ပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် သင်ဟာ အဲဒါကို အပြည့်အ၀ ခွဲဝေမပေးနိုင်ပါ။
ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ တကယ့် အကြွင်းမဲ့ ချွင်းချက်မရှိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အခြားသူများရဲ့အပြုအမူပေါ်မှာ မူမတည်ပါ။ ဒါဟာ အခြားသူများရဲ့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းအပေါ်မှာ မူမတည်ပါ။ သူတို့ဟာ သင့်ကို ပြုလုပ်တဲ့အရာ, သူတို့ဟာ သင့်ကို ပြုလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့အရာအပေါ်မှာ မူမတည်ပါ။ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ထားယုံမှတစ်ပါး မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့တကယ့်သဘာဝဖြစ်တဲ့အတိုင်း သင့်မှာ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
နေမင်းလို တောက်ပအလင်းရောင်ပေးခြင်းမျှထက် အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါ။ နေဟာ တိမ်များကိုကျော်လွန်ပြီး အမြဲ တောက်ပနေပါတယ်။ တောက်ပခြင်းမှ ရပ်တံ့သွားအောင် တစ်စုံတစ်ခုကမျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ နေကြတ်ခြင်း လကြတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ အခါမှာတောင် အဲဒီအရိပ်ဟာ နေမှ အလွန်ဝေးကွာသွားပါတယ်။ နေကို ထိတွေ့ခြင်း မရှိပါ။
အလားတူ သင့်ရဲ့ဘ၀မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွင် နှောင့်ယှက်မှုလို့ ထင်ရတဲ့အရာအားလုံးဟာ- သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ , အကြွင်းမဲ့ ချွင်းချက်မရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့သဘာဝကို အဝေးသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း မရှိပါ။
သဘောရိုးစစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လက်ခံရရှိဖို့စွမ်းရည်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပေးအပ်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ လားရောက်လိုက်ပါလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများအပြားကို ဖော်ပြ သိမြင်စေတဲ့အခါမှာ မကြာခဏပါပဲ သင်ဟာ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာကို မသိပါ။
သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားတွေ့ကြုံမှုက သင့်ကို ဗဟိုပြုလေလေ ပြီးတော့ သင်က သိနားလည်လေလေ - သင်ဟာ မည့်သည့်အပြုအမူမျိုးကဖြစ်စေ ဖော်ပြတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာ ပမာဏမျိုးကိုမဆို နှလုံးသားတည်းဟူသောနေအိမ်မှာ ထိတွေ့ခံစားမိလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အတွင်းသို့ ၀င်ကြည့်လျင်--- ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ခံစားမှုနှင့်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ထိခိုက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု မဟုတ်ဆိုတာ သင်သိလာပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ တကယ့်ဘ၀ဖြစ်တည်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Friday, February 18, 2011
ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အလွန်လှပတဲ့အရာဟာ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကို ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများက အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ရှု့မြင်မိတာထက် အလှတရားကို ပိုလို့မြင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တအားကောင်းတဲ့ အတွင်းသန့်ရှင်းဖြူစင်မှုကြောင့် သူတို့တွေဟာ အရာရာတိုင်းမှာ အလှအပကို မြင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့လေးတွေဟာ အတ္တကမ္ဘာမှာ အေးငြိမ်းတဲ့အတွက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားရပါမယ့်။ လေးစားမြတ်နိုးရပါ့မယ်။
စိတ်က တိုးတက်လာတဲ့အခါ အဲဒါကလည်းပဲ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှုအသီးသီးကို ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ မှားယွင်းမှု အပြစ်အနာအဆာများကို ရှာဖွေဖို့ စတင်ပါတယ်။ အဲဒါက တကယ်လှပပြီး ကောင်းတဲ့အရာ ဖြစ်လျင်တောင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အရုပ်ဆိုးအကြည်တန်မှုနှင့် မသန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မှုကိုပဲ မြင်ချင်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွမ်းကျင်ပြောင်မြောက်တဲ့ ပန်းချီပန်းပုစတဲ့ အနုပညာရှင်က တစ်ခုခုကို ဖန်တီးပြီးပြီဆိုလျင် အကျွန်ုပ်တို့က မူမမှန်ချက်များကို ရှာဖွေပါတော့တယ်။
သို့စေကာမူ ကလေးတွေဟာ သူ့တုိ့ရဲ့ တကယ့်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် အရာရာတိုင်းကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ သူဟာ လူတိုင်းနဲ့အရာရာတိုင်းအပေါ် အလှတရားကို မြင်ပါတယ်။ အခြားအရာများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ယင်တော့ သူ့မှာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ အတွင်းကမ္ဘာမှာတော့ အရာရာတိုင်းဟာ လှပနေပါတယ်။
ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အလှအပဟာ ခွဲထုတ်လို့မရပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ပန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပကတော့ ရနံ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတူတကွသွားပါတယ်။ ပန်းတပွင့်ဟာ ဒြပ်ရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းဟာ သူ့ရဲ့အရည်အသွေးကို ပေးနိုင်စွမ်းရပါ့မယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရနံ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့အနီးသို့ ရောက်ရှိလာမှသာလျင် သင်က အဲဒါရဲ့အလှအပကို တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ တန်ဖို့းထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က အဝေးမှာဖြစ်နေယင်တောင်မှ အဲဒီရဲ့ရနံ့ကတော့ လေထဲမှာ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းတစ်ပွင့်ဟာ ရနံ့တစ်ခုခု မရှိလျင် သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတစ်ဝက်ဟာ ထွက်ခွါသွားပါတော့တယ်။ အလှအပဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့ပန်းမှ ရှေးဦးကြိုတင်လို့ လာပါတယ်။ ပန်းနဲ့ရနံ့ဟာ မခွဲမခွါ တစ်ခုတည်းတစ်ပေါင်းတည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ငိုငြီးသံနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပြုံးရွှင်မှုက တွေ့ဆုံကြုံကြိုက် အသိအကျွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါ အလှအပရဲ့ပြည့်စုံမှုဟာ အရုဏ်ကျင်း မိုးလင်းသွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုဟာ အကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက ဖမ်းယူချင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက ပျံသန်းနေတာကို တွေ့မြင်ချင်တာတူညီတဲ့ ငှက်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာယာမှုအလိုဆန္ဒနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြားထဲမှာ ခြားနားထားသလား? တကယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုများစွာက ၀မ်းသာကျေနပ်မှုကို အမြဲတမ်း လိုက်ပါလေ့ရှိပေမယ့် သာယာမှုအလိုဆန္ဒကိုတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်ခြင်းက လိုက်ပါလာလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြင်ပပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အတွင်းပျော်ရွှင်မှုဆိုပြီး ပျော်ရွှင်မှု နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ နုးညံ့တဲ့ခြားနားမှု ရှိပါတယ်။ ပြင်ပပျော်ရွှင်မှုရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်မဟုတ်သလို အကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်လဲမဟုတ် -ဆိုတာ အကျွန်ုပ်တို့ ခံစားမိပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တကယ့်မကြာခဏဆိုသလို အခြားသူများထံမှ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုကို ဆွဲယူလုယူချင်ကြပါတယ်။
အတွင်းပျော်ရွှင်မှုက အဲဒီအရာလိုမဟုတ်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့က ကမ္မဌာန်းတရားကို အားထုတ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အာရုံပြုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါ အဲဒီအချိန်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ဝိညာဉ် ဖြစ်တယ် - ဆိုတာ အကျွန်ုပ်တို့ ခံစားမိပါတယ်။ အတွင်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ ရေပန်းတစ်ခုလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အလိုအလျောက် သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပျော်ရွှင်မှုဟာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ခြင်း မရှိပါ။ လိုအပ်တဲ့ဆန္ဒရှိလျင် မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း လျက်တပြက်အတွင်း အကျွန်ုပ်တို့လူသားသဘာဝကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်စက္ကန့်အတွက်ပင် မှန်ကန်တဲ့အတွင်းပျော်ရွှင်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားရမယ်ဆိုလျင် ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာ- အကျွန်ုပ်တို့ ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်နေခြင်းနဲ့ မလှပတဲ့အရာအားလုံးကို ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပျော်ရွှင်မှုရှိချင်တယ်ဆိုလျင် ဖန်တီးခံလက်ရာ သက်ရှိသက်မဲ့အရာအားလုံးရဲ့ အချို့သောရှု့ထောင့်အားလုံးဆီသို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အခြေအနေများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ် - ဆိုတာ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွင်းပျော်ရွှင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်ရှု့နိုင်တဲ့အခါမှသာလျင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ- အကျွန်ုပ်တို့က တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီအတွင်းပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်လို ရရှိနိုင်မလဲ? အတွင်းပျော်ရွှင်မှုဟာ အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ရဲ့ ၀င်သက်တစ်ရှု-ထွက်သက်တစ်ရှိုက်ဖြစ်တယ်- ဆိုတာ တကယ်သတိပြုမိတယ်ဆိုလျင်, အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘဲ မတည်နိုင်ဘူး- ဆိုတာ ခံစားမိတယ်ဆိုလျင်, ပြီးတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုမရှိလျင် တကယ့်အခိုက်အတံ့အတွင်း သေဆုံးလိမ့်မယ်- ဆိုတာ ခံစားမိလျင်, - အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှင်က သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို အကျွန်ုပ်တို့အပေါ့် ကြဲဖြန့်ပါတော့တယ်။
စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ အကျွန်ုပ်တို့က အရှိကိုအရှိအတိုင်း အမြဲမပြတ်အဆက်မပြတ် သတိထားမိခြင်းအသိမှ လားရောက်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်နေ့ ၂၄-နာရီကြာ ကမ္မဌာန်း မထိုင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းရဲ့ စွမ်းအားများနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘ၀ရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုကို ကျေနပ်နှစ်သက်စွာ လက်သင့်ခံသဘောထားခြင်းဖြင့် တစ်နေ့ ၂၄-နာရီကြာ ခံစားသုံးဆောင်မိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, February 14, 2011
Pythagoras ဟာ ပေါင်းစပ်မှုကို ဖန်တီးရာမှာ ပထမဆုံး သုတေသနလုပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကဆိုလျင် ၂၅-ရာစုနှစ်ကို ဖြတ်သန်းပြီးပြီဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ နောက်ထပ် အဲဒါကို ကြိုးစားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီမတိုင်မီကလည်း အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်က အဲဒါကို မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ နှစ်ခုစလုံးရဲ့နောက်မှာ အခြားဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အဲဒါကို မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာနဲ့ ထူးခြားနက်နဲတဲ့ ညဏ်အမြင်ဆိုင်ရာ နှစ်ခုစလုံးဖြစ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက ရှားပါးလှပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကဲ့သို့ ကြီးမားတဲ့အသိညဏ်ထူးကိုရရှိပြီးသူ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ နျူတန်လို တကယ့်သိပ္ပံပညာရှင်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာနှစ်ခုနှင့် အိမ်မှာ ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရှိရဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ Pythagoras ဟာ အဲဒီခေတ်ရဲ့ပြိုင်စံရှားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ပေါင်းစပ်မှုကို လိုအပ်ခဲ့သလို ယနေ့ အဲဒါကို လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကမ္ဘာကြီးက တူညီတဲ့အချက်အပေါ်မှာ တဖန် ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးက လှုပ်ရှားနေတဲ့ဘီးတစ်ခုမှာ ရွေ့လျားကျက်စားနေပါတယ်။ ဆန်စခရစ်မှာ သံသရာက ကမ္ဘာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘီးကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။ ဘီးက ကြီးမားပါတယ်။ ၂၅-ရာစုနှစ်မှာ သံသရာတစ်ခု ပြည့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ပြည့်ပါတယ်။
Pythagoras မတိုင်မီ ၂၅-ရာစုနှစ်က Atlntis ဟာ လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေး သိပ္ပံပညာ ကြီးထွားမှုကြောင့် အဆုံးသတ်နိဂုံးချုပ်သွားပါတယ်။ အသိပညာမပါတဲ့ သိပ္ပံတိုးတက်မှုဟာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ ဓားတစ်လက်ကို ပေးထားလိုက်သလို ဖြစ်ပါတယ်။
Pythagoras အချိန်ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ ၂၅-ရာစုနှစ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီ။ တစ်ဖန် ပရမ်းပတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘီးဟာ တူညီတဲ့အစွန်းထိပ်ဖျားကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ တွယ်ရာမဲ့တဲ့ ဘ၀ဟာ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ တန်ဖိုးများလို အဓိပ္ပါယ်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပါတယ်။ ကျြီးမားတဲ့အမှောင် ကျရောက်လာပါတယ်။ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ပါ။ ရိုးရိုးစင်းစင်း အမှတ်တမဲ့ပဲ သဘောထားကြပါတယ်။
အခွင့်အရေးအားလုံးရှိပုံပေါ်တဲ့ ဘ၀တစ်ခုမှာ ရည်ရွယ်ချက်လဲရှိပုံမပေါ်သလို အဓိပ္ပါယ်လည်း မဲ့နေပုံပေါ်ပါတယ်။ သေပြီးတဲ့နောက် ဘ၀ ရှိ-မရှိဆိုတာ - ပြီးတော့ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် အလဟဿ အချည်းအနှီးဖြစ်တယ်၊ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်တယ်၊ စက်ရုပ်လှုပ်ရှားသလို ဖြစ်တယ် - ဆိုတာ သင့်အတွက် ဘ၀ကို ဂရုတစိုက်ရှိပုံမပေါ်ပါ။ အရာရာဟာ မရေမရာအကျိုးအကြောင်း ကင်းနေပုံပေါ်ပါတယ်။
ဖရိုဖရဲပရမ်းပတာအချိန်ကာလဟာ - Atlantis မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကြီးမားတဲ့ ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းခံတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သလို ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ဖက်မှာ လူသားမျိုးနွယ်တိုးတက်မှုအတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ဖြစ်ဖို့ အထောက်အထားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒီအရာအပေါ်မှာ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓ- မဟာဝီရနဲ့အခြားသူများကို ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ဂရိမှာ Pythagoras နဲ့ Heraclitus တို့ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ Lao Tzu, Chuang Tzu, Confucius, Mencius, Lieh Tzu တို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အီရန်မှာ Zarathustra ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗြဟ္မဏယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ ကြီးကျယ်တဲ့ ဥပနိသျဒ်ဟောသူတွေဟာ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြီးကျယ်တဲ့ဆရာအားလုံးကို ၂၅-ရာစုနှစ်အကြာက လူသားမျိုးနွယ်သမိုင်းမှာ ယုံမှားဖွယ်မရှိတဲ့ ခရီးတစ်ထောက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ကြပါတယ်။
ယခု ကြီးမားတဲ့ပရမ်းပတာဖရိုဖရဲက တဖန်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူသားရဲ့ကံကြမ္မာဟာ အကျွနု်ပ်တို့ ပြုလုပ်တဲ့အရာအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ Atlantis မှာ သူကိုယ်တိုင်က ဖျက်ဆီးတဲ့ ခေတ်မီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မှာဖြစ်စေ- ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဗဟုသုတထဲမှာ, အကျွန်ုပ်တို့ရဲသိပ္ပံပညာကမ္ဘာထဲမှာ နစ်မြှုပ်လိမ့်မှာဖြစ်စေ- အကျွနု်ပ်တို့ဟာ အကြီးအကျယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို ယူနိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
သာမန်လူသား- အများစု-ဟာ သတိလစ်မေ့မြောစွာ နေထိုင်နေကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ ရှေ့မှာ အနည်း ငယ်သောခြေလှမ်းကိုတောင် ကြိုတင်မမြင်နိုင်ပါ။ ကမ္မဌာန်းအတွက်- အတွင်းခရီးအတွက်- ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်- အေးငြိမ်းမှုအတွက်- ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကြီးမားတဲ့အရှိန်အဟုန်ကို ဖန်တီးနိုင်လျင် လူသားမျိုးနွယ်ဟာ အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားလာပါလိမ့်မယ်။ အသစ်တစ်ဖန်လူသားဟာ မွေးဖွားလာပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ဒီအချိန်ကို လွဲချော်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက် အဲဒီနောက် ၂၅-ရာစုနှစ်အကြာ သင်ဟာ နောက်ထပ်တစ်ဖန် တူညီတာအတွက် ဆက်လက်ကျန်ရစ်နေပါလိမ့်ဦးမည်။ အချို့အနည်းငယ်သောသူများသာ အသိညဏ်ထူးကို ရရှိကြပါလိမ့်မယ်။ နေရာအနှံ့အပြား ရံဖန်ရံခါမှ လူတစ်ယောက်ဟာ တပ်လှန့်နိုးဆော် လာပါလိမ့်မယ်။ နိုးနိုးကြားကြား အသင့်အနေအထား ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ဒါမှမဟုတ် နတ်တစ်ပါးကဲ့သို ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လူသားရဲ့ကြီးမားများပြားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ ငရဲမှာ ဆက်လက်ပျော်မွေ့နေထိုင်ဖို့ ထွက်ခွါသွားကြပါတယ်။
အကျွန်ုပ်ဟာ - အရှေ့နဲ့ အနောက်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှု- သိပ္ပံပညာနဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ပေါင်းစပ်မှု- အသိပညာနဲ့ ဗီဇစိတ်ဖြင့်အလိုလိုသိခြင်းရဲ့ပေါင်းစပ်မှု- အမျိုးသားစိတ်နဲ့အမျိုးသမီးစိတ်ကို ပေါင်းစပ်မှု- ဦးခေါင်းနဲ့နှလုံးသားကို ပေါင်းစပ်မှု - ဘယ်နဲ့ညာပေါင်းစပ်မှု- ကို သင့်ထံသို့ သယ်ဆောင်နေပါတယ်။ အကျွန်ုပ်ဟာ ကြီးမားတဲ့ ညီညွတ်မှုကို ဖန်တီးဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းတွေကို ကြိုးစားနေပါတယ်။ အကြောင်းက အဲဒီညီညွတ်မှုကသာ အဲဒီလိုက်ဖက်မှုကသာ ကယ်တယ်နိုင်မှာ- ပြီးတော့ ဘ၀သစ်သို့ သယ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Tuesday, February 01, 2011